ဒေါင်းလုပ်ညမ်းဂိမ္း:၂၀၀+အခမဲ့ Xxx ဂိမ်းအတွင်းအပြင်!
နာနှင့်ငြီးဘဲတိုက်ရိုက်သုံးစွဲဖို့အကောင်းဆုံးအချို့ဂိမ်းများထွက်ရှိပါတယ်? ကြှနျုပျတို့သညျနားထောငျတျော-သင်အထူးသဖြင့်ဆိုရင်တစ်ယောက်ယောက်သောအချစ်အရှုပ်များချွတ်နေစဉ်သင်ဂိမ်း! မြင်တဲ့အတိုင်း၊ဗဟိုစာကြည့်တိုက်၏ဒီနေရာတွင်ဒေါင်းလုပ်ညမ်းဂိမ်းများ–ခေါင်းစဉ်ရှိစေခြင်းငှါအလွန်ကောင်းစွာပေးသွားမည်–အပေးဖို့လက်လှမ်းအတူသင်တို့အချို့အများဆုံးပျော်စရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခေါင်းစဉ်။ ကျွန်တော်မွေ့လျော်ပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်၊အချောရွေးချယ်ရေး၏လွှတ်ပေးမှုကကျွန်တော်တို့သုံးစွဲသည့်အစွန်းရောက်များ၏ပမာဏအပေါ်အချိန်ရတဲ့အချိန်မှာ။, ကျွန်တော်လည်းဆက်သွယ်မေးမြန်းနှင့်ပြတိုက်မှူးအလုပ်လုပ်မှအကောင်းဆုံးတတိယ-ပါတီများနှင့်သူတို့ကိုထားရန်ဒီမှာအားလုံး၊ဒါကြောင့်တက်လက်မှတ်ထိုးသည့်အခါမှဒေါင်းလုပ်ညမ်းဂိမ်း၊သင်အနေများကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရတဲ့အမားကျွန်းစုဂိမ်းများအလားတူအရာကိုသင်မျှော်လင့်ချင်ပါတယ်အလာ၏အကြိုက်ထဲကနေရေနွေးငွေ့သို့မဟုတ်အခြားပလက်ဖောင်း။ ကျွန်တော်တို့အတွက်ရွှေအသက်အရွယ်၏ညမ်းဂိမ်းထုတ်လုပ်မှုကိုအခုအချိန်မှာ၊အဲဒါကိုအရီထွက်လက်လွတ်အားလုံးအပေါ်အယှက်ခေါင်းစဉ်နေစဉ်သူတို့နေဆဲရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်၊သင်မည်သို့တွေအကြောင်းအများဆုံးလုပ်ဖို့အသိဉာဏ်ရှိသောအရာကဒီမှာလိုက်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်အကောင့်တစ်ခုများအတွက်ဒေါင်းလုပ်ညမ်း။, တက်လက်မှတ်ထိုးထက်လျော့နည်းကြာ ၆၀ စက္ကန့်နှင့်သင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ချက်ချင်းဖမ်းပြီးခေါင်းစဉ်င့်ပြီးတာနဲ့အတွင်းပိုင်း–အဘယ်သူမျှမ၊အဘယ်သူမျှမသောက်သုံးသေချာပေါက်အဘယ်သူမျှမရှုပ်ထွေး! လူတိုင်းကိုချစ်ဒါင္းညမ်းဂိမ်းများနှင့်တော်တော်လေးသိသာင့်ကိုမြင်ရအဘယ်ကြောင့်!
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့သဘောတူနီးပါးသီးသန့်နှင့်အတူဂိမ်းအကြောင်းသင်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်လိုအပ်ပြည်တွင်းဂိမ်းကစားနိုင်ရန်အတွက်၊ငါတို့အဘို့အရေးရှိသည်ဖို့အကောင်းဆုံးအဆာဗာဖြစ်နိုင်ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ညမ်းဂိမ်းကစားအတွေ့အကြုံကိုဘယ်တော့မှဖြစ်ပါသည်မိနစ်အနည်းငယ်ထက်ပို။ လောလောဆယ်ဝက်ဘ်ကွန်ယက်တစ်ခုအပေါ်ခွင့်ပြုထားသောတစ်ဦးချင်းဆက်သွယ်ရောက်ရှိဖို့အထိ ၁ တိုးျ/့အမြန်နှုန်း၊အရာဖြစ်ပါသည်အကြမ်းဖျင်းညီမျှပတ်လည် ၁၅၀ ပာ/ထည့္ပါ။, ဒီတော်တော်လေးအများကြီးအတွက်ကန့်သတ်အများဆုံးခေတ်သစ်ဆက်သွယ်နေစဉ်သူတို့တိုးမြှင့်စေခြင်းငှါအနာဂတ်အတွက်၊ကျနော်တို့စိတ်ချယုံကြည်ကြောင်းမရှိတစ်ခုတည်းဂိမ်းအတွင်းနေရာယူလိမ့်မည် ၅ မိနစ်ထက်ပိုကြာကြာဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့သင်အမှန်တကယ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖမ်းမှာအပြည့်အဝမြန်နှုန်း။ နီးပါးခပ်သိမ်းသောအမှု၊အဆို့အစားရဲ့ဆက်သွယ်နှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာ–၊တစ်ခါတစ်ရံခက်ခဲမောင်းပဲမတူတက်ထားရန်အချက်အလက်ပစ်နိုင်ပါဆင်းပိုက်!, ဒီအပြင်၊ဒေါင်းလုပ်ညမ်းဂိမ်းများတယ်သဟဇာတပိုပြတင်းပေါက်များအဘို့၊MacOS နှင့် Linux စက်:သမျှကိုစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်င့်သုံးနိုင်ရန်အတွက်လက်လှမ်းမီဒီဂိမ္း၊သူတို့အားလုံးကောင်းခြင်းနှင့်သင်ရှိသည်မဟုတ်လိမ့်မည်ကိုစိုးရိမ်ကြောင်းအချို့သိမ်းပိုက်ဗေးဆော့ဖ်ဝဲကိုအကောင်းတစ်ဦးအချိန်ရှိသည်။ ဒီတော့ဝေး၊ဒါကြောင့်ကောင်းများအတွက်ခြုံငုံအတွေ့အကြုံ၊မှန်သော? ကောင်းစွာ–အပေါ်ဖတ်ရန်၊အမှုအရာအကြောင်းကိုရတစ်ခုလုံးအများကြီးပိုပြီးပျော်စရာ!
ကျွန်တော်ဂရုစိုက်အလွန်ကြီးကြောင်းနိုင်ဖြစ်ခြင်းများကိုတစ်လျောက်ပတ်သောအရေအတွက်ဂိမ်းအဘို့အလူတိုင်းထွက်ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်၊နှင့်နေစဉ်ကျနော်တို့ထုတ်လုပ်ရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခေါင်းစဉ်ကထင်ရိုးရိုးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်၊သင်သည်လည်းဖမ်းဖိုင်တွေကနေအခြားသူများပါကငါတို့သည်ကြေးမုံ။ လောလောဆယ်တွင်၊စာကြည့်တိုက်အကြောင်းကျနော်တို့ထိန်းသိမ်းထားထား ၂၈ သီးသန့်ခေါင်းစဉ်ကနေဒေါင်းလုပ်ညမ်းဂိမ်းများနှင့်ကျော် ၂၅၀ တတိယ-ပါတီအတင်ထား–ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောတူသောအဖို့လုံလောက်တဲ့ထက်ပိုအဖုံးကိုအများဆုံးအကျိုး!, ကျွန်တော်အစကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေလိုကြောင်းများစွာရှိပါတယ်ဂိမ်းငါတို့သည်သင်တို့အကြည့်အပတ်စဉ်အခြေခံပေါ်မှာဖြစ်စေမဆုံးဖြတ်ရန်သူတို့အဘို့အသင့်လျော်။ အကြောင်းအတော်များများသူတို့ကိုမဖြတ်အောင်နှင့်ရကန်ချက်ချင်းပြန်:ကျနော်တို့သာချင်သူတွေတက်လက်မှတ်ထိုးရန်ဒီနေရာဖြစ်ပေးအပ်နှင့်အတူအကြွင်းမဲ့အာဏာအကောင်းဆုံး၏အကောင်းဆုံး။ အဘယ်သူမျှမဖြစ်ချင်ခဲ့တာနှင့်အတူဆင်းရဲအရည်အသွေးဂိမ်းအချို့ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ဖို့ကောင်းတစ်စိတ်ကူးရှင်၊မှန်သော? ကျွန်တော်တို့မယုံနိုင်လောက်အောင်မြင့်မားသောစံချိန်စံညွှန်းနှင့်မပတ်သက်ဖို့သူတို့ကိုမည်သူမဆိုများအတွက်။
ကျွန်တော်ပေးဖူးပါတယ်သင်အနည်းငယ်လျောက်ပတ်ထြင္ခ်င္လာဒီမှာမှအဖြစ်ဆိုးများဒေါင်းလုပ်ညမ်းဂိမ်းများ၊ဒါပေမဲ့ကျွန်တော့အထင်သင်အမှန်တကယ်ချင်တယ်ဆိုရင်သွားမယ့်ဘာကိုမြင်နိုင်စေသည်သဘောအရရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကို။ ဘာအတွက်လိုအပ်သော? သဘာဝကျကျ၊အကောင့်တစ်ခုသင်၏ကိုယ်ပိုင်! ကျွန်တော်စိတ်လှုပ်ရှားင့်နိုင်မှကြောင်းကြေညာယခု၊မှဝင်ရောက်ခွဒါင္းညမ်းဂိမ်းအခမဲ့နေစဉ်ကျွန်တော်ဖြတ်သန်းသွားတစ်ခုတိုးချဲ့ beta ကာလ။ ဤနောက်ဆုံးပတ်ပတ်လည် ၁၈ လပေါင်းများစွာ၊ကျနော်တို့တောင်မှအခမဲ့မော်ဒယ်နိုင်တယ်ဆိုရင်အခြားနည်းလမ်းများကိုရှာဖွေဖို့ငွေကြေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းအရာ။, နောက်ဆုံးမှာ၊ထိုဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်စေမ၏တက်လက်မှတ်ထိုးရန်ဒီမှာသင့်အနေနဲ့မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ရိုးရှင်းပြီးတာနဲ့၊သင်ပြုမပြုပြုလိုအပ်သမျှသောအများကြီးဖို့အမိန့်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုးစား။ ဒါကြောင့်၊သင်သည်အဘယ်သို့ဆို? ပေးချင်တစ်ခုတည်းသောအရပ်ကားနှင့်အတူပတ်ပတ်လည်ကောင်းသောအရည်အသွေးညစ်ညမ်းဂိမ်းဒေါင်းလုဒ်အစမ်းသပ်မောင်းနှင်? တက်လက်မှတ်ထိုးယခုမြင်ကြကုန်လျှင်သင်ရရှိရန်ကြာမြင့်သောအရာကိုဆန့်ကျင်တက်သွားအကောင်းဆုံးအကြောဂိမ်းကစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်!